८ अर्ब ९७ करोडभन्दा बढीको कारोबार, ५४.७५ अंकले घट्यो नेप्से | Artha News Nepal
Home	फिचर	८ अर्ब ९७ करोडभन्दा बढीको कारोबार, ५४.७५ अंकले घट्यो नेप्से
८ अर्ब ९७ करोडभन्दा बढीको कारोबार, ५४.७५ अंकले घट्यो नेप्से
काठमाडौं – आइतवार बजार २ दशमलव २६ प्रतिशत घटेर बन्द भएको छ । अघिल्लो कारोवार दिन बिहीवारको तुलनामा बजार ५४ दशमलव ७५ अंकले घटेर २ हजार ३७० दशमलव ५४ विन्दुमा झरेको हो । बिहीवार पनि बजार १६ दशमलव ५५ अंक घटेको थियो । उता सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ९ दशमलव ७३ अंक घटेर ४३२ दशमलव ३३ विन्दुमा झरेको छ ।
उच्च अंकले घटेको बजारमा रू. ८ अर्ब ९७ करोड ३२ लाख ६ हजार बराबरको १ करोड ६२ लाख ७७ हजार २४५ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । कारोबार रकमले भने बजारमा उत्साह कायमै रहेको देखाउँछ । बिहीवार हालसम्मकै रेकर्ड ब्रेक गर्दै रू. ९ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख ५६ हजार बराबरको २ करोड २१ लाख ५३ हजार कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो ।
आइतवार सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सकै भएको छ । यसदिन उक्त कम्पनीको रू. ३९ करोड ८९ लाख ५९ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । गत सातादेखि उक्त कम्पनीले लगातार सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार गर्दै आएको छ ।
उच्च अंकले घटेको बजारमा आइतवार उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य ३ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता रू. ७६ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. २ हजार २७३ कायम भएको छ ।यस दिन कारोबारमा आएका सबै परिसूचक घटेको छ । यी मध्ये पनि वित्त समूहको परिसूचक सर्वाधिक ४ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको हो ।
त्यस्तै बैंकिङको २ दशमलव ४५ प्रतिशत, व्यापारिक शून्य दशमलव ६८ प्रतिशत, होटल १ दशमलव १४ प्रतिशत, विकास बैंक २ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत, जलविद्युत १ दशमलव ९८ प्रीतशत, निर्जीवन बीमा २ दशमलव १ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन २ दशमलव १८ प्रतिशत, अन्य १ दशमलव ३२ प्रतिशत, लघुवित्त २ दशमलव ९२ प्रतिशत , जीवन बीमा २ दशमलव ५८ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको परिसूचक शून्य दशमलव ४७ प्रतिशतले घटेको छ ।
घटेको बजारमा प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य सर्वाधिक ९ दशमलव ९३ प्रतिशतले बढेको छ । प्रतिकित्ता रू. ६९ ले बढेर उक्त कम्पनीको अन्तिम मूल्य रू. ७६४ कायम भएको हो । यो दिन सर्वाधिक शेयरमूल्य रिलायन्स फाइनान्सको ८ दशमलव ३० प्रतिशतले घटेको छ । उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. २१ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. २३२ कायम भएको हो ।
कारोबारनेप्सेनेप्से परिसूचकशेयर कारोबार